ဓာတ်သေပညာကျမ်း (အပိုင်း-၄) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Choice » ဓာတ်သေပညာကျမ်း (အပိုင်း-၄)
Posted by ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် on Jun 7, 2013 in Editor's Choice, Photography | 18 comments
အဲဒီတော့ ဖိုကယ်လန့်ကြောင့် ပြောင်းလဲမှု ၂ မျိုးဖြစ်သွားတဲ့ ပေါ်ကို အခြခံပြီး လန်းစ်အမျိုးမျိုး အကြောင်းကို ထပ်ရှင်း ပြပေးပါမယ်။
Prime lens မှာ ဖိုကယ်လန့် အသေဖြစ်ပါတယ်. များသော အားဖြင့် လန်းစ်ကို လက်နဲ့ အနီး/အဝေး လှည့်လို့ရပြီး ဒီ prime lens တွေကတော့ လှည့်လို့မရပါဘူး.. 50mm ဆိုရင် 50mm မှာ အသေဖြစ်ပါတယ်။ prime lens တွေမှာ အပါချာက အကျယ်ဆုံး ပါတတ် ပါတယ် အပါချာ အကြောင်းကို နောက် ပို့စ်တွေမှာ ဖော်ပြပေးပါမယ်။ 50mm ကို portrait ရိုက်တဲ့ နေရာမှာ အသုံးများပါတယ်.. အပါချာ က အနဲဆုံး ရှိတာကြောင့် DOF ကို ကျဉ်းစေတဲ့ အတွက် ပုံတွေကို ပိုမို ကြွရွ လှပစေပါတယ်. (အပါချာ၊ DOF ကို နောက်မှာ ရှင်းပါမယ်)
kit lens က ကင်မလာနဲ့ အများဆုံးတွဲပါလာတဲ့ လန်းဖြစ်ပါတယ်..ဖိုကယ်လန့် 18-55 စတဲ့ အနဲ ဆုံးအသုံးပြုနိုင်တဲ့ အခြေအနေနဲ့ တွေ့ရတတ်ပါတယ်.. 18mm ကတော့ wide ဖြစ်သွားပြီး 55 ကတော့ normal ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ပုံမှန် ရိုက်လို့ရရုံပါပဲ။
Normal lens ကတော့ focal length ပိုကွာခြားပြီး တယ်လီ ပါ ပါဝင်နေပြီး အဝေး၊ အနီး တော်တော်များများ ကို ရိုက်နိုင်ပါတယ်။ 18-105, 28-105,18-135, စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ 70 ကျော်ရင် တယ်လီ ဖြစ် သွားတာကြောင့် wide ကနေ တယ်လီ အထိကောင်းကောင်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
Nikon 18-105 normal lens
Tele Lens တွေကတော့ 70mm အထက်ကို ခေါ်ပြီး 70-200, 55-300 စသဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်.. tele မှာ အဓိက ပါဖို့ ထပ်လိုတာက vibration ကိုလျှော့ချပေးတဲ့ စနစ် ဖြစ်ပါတယ်.. ကင်နွန်မှာ IS လို့ ခေါ်ပြီး နီကွန်မှာ VR လို့ခေါ်ပါတယ်။ tele lens တွေဟာ အဝေးကို ဆွဲရိုက်တာတွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် နဲနဲလေးမှ တုန် လို့ မရတာကြောင့် vibration ကိုလျှော့ချပေးတဲ့ စနစ် ပါမှ သာ ကောင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Nikon 70-300 Tele Shot (ရွှေတိဂုံဘုရားထီးတော်)
Wide နဲ့ Super wide လန်းစ်တွေမှာ တော့ 11-16 , 18-24 စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ် မြင်ရတဲ့ ဒီဂရီ ပိုကျယ်သွားပြီး အဆောက်အဦးတွေ၊ ရှုခင်းတွေ တွေရိုက်တာ များပါတယ်။ အခန်းကျဉ်း တွေဘာတွေ၊ လူအုပ်စု များတဲ့ အခါ သာမန် လန်းစ်နဲ့ မဆန့်တော့တဲ့ အခါ ဒီကောင့်ကို သုံးပါတယ်။
Tokina 11-16 Super wide lens
Fish eye lens ကတော့ ငါးမျက်လုံးလိုဖြစ်ပြီး 10mm လောက်ဖြစ်သွားပြီး မြင်ကွင်းကို 180 ဒီဂရီအထိ ၀င်ပါတယ်.. ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ပုံတွေအဖြစ် လုံးလုံးကြီးတွေ၊ ခွက်ခွက် ကြီးတွေ ပေါ်ပါတယ်..
Nikon 10.5 Fish eye (ဒီလန်းစ်ကတော့ ကျုပ်ဆီမှာ မရှိပါဘူး)
Micro ကတော့ အနီးကပ်ရိုက်တဲ့ လန်းစ်ပါ. Micro lens ကတော့ တော်တော်များများမှာ မရှိတတ်ပါဘူး..
အဲဒီတော့ DSLR ကင်မလာ သမားတွေမှာ အနီးရိုက်ချင်ရင် အနီးရိုက်တဲ့ လန်းစ်ပြောင်း၊ အဝေးရိုက်ချင်ရင် အဝေးလန်းစ် ပြောင်း၊ ကပ်ရိုက်ချင်ရင်လဲပြောင်း၊ လူရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လဲ ပြောင်း ဆိုပြီး အနှီ လန်းစ် ဟုခေါ်သော ပြောင်း တွေကို မကြာခဏ ပြောင်းလဲ ရိုက်နေရသော ဆြာသမားများကို ပလို ဓာတ်သေ ဆြာများဟု မှတ်ကြပါကုန်။ တချို့ ဖွတ်ကလိဒင်္ဂါး တတ်နိုင်သူ တွေကတော့ နောက် ဘော်ဒီ တွေ ထပ်ဝယ်လို့ သူများတွေ ကင်မလာ တစ်လုံးတောင် အနိုင်နိုင် ၀ယ်နေရတဲ့ အချိန်မှာ သူရို့တွေက ကင်မလာ ကြီး ၂ လုံး သုံးလုံးလွယ်ပြီး လက်စွမ်းပြနေကြလေရဲ့
ပုံမှန်အနေနဲ့တော့ DSLR ကင်မလာတစ်လုံးဈေးဟာ ၆ သိန်းကနေ သိန်း ၂၀ ကျော်ရှိနေပေမယ့် .. တကယ်တန်း ၀ယ်ပြီးသွားတဲ့ အခါ ထပ်ပြီး သုံးရတဲ့ လန်းစ်တွေရဲ့ တန်ဖိုးနဲ့ ပြန်ယှဉ်တဲ့ အခါ မပြောပသလောက်ဖြစ်သွား ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ လန်းစ်တွေဟာ ကင်မလာ ထက်တောင် ပိုဈေးကြီးပါသေးတယ်။
လန်းစ်အကြောင်းတော်တော်ပြောအပြီးမှာ နောက်တဆင့်ကတော့ ဓာတ်သေပညာရပ်အတွက် အရေးကြီးဆုံးထဲက တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ အပါချာ အကြောင်း ကို နောက် တစ်ပို့စ်မှာ ဆက်ပါမယ်…
P.S အဲ သင်တန်းလေးမှန်မှန်တက်ကြတာတော့ ၀မ်းသာပါတယ် .. ဒါပေမယ့် fb မှာ ကျုပ် page လေးကို like တို့ share တို့ တို့ comment တို့လုပ် ပေးကြအုံးလေဗျာ.. ခင်ညားတို့ကလဲ..
မဖတ်ခင် နေရာ အရင်ဦးပြီ။
ခုံ နံပတ် ၁ ကေဇီ။
ပလက်စင့် (ပေးပါ) တီချာ။
မဖတ်ခင်တောင် နေရာ အရင်ဦးသတဲ့ တော်တော် တော်တဲ့ တပဲ့ ပဲ
ဖတ်ပြီးပြီဗျို့ … ၄မှာဆြာ ထည့်ရှင်းမယ်လို့ ထင်ပြီး မပါတာလေး ကျနော် ဒီမှာ ဖြည့်ပါရစေဗျာ…
focal length, zoom, နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ Conpact Vs DSLR ကိစ္စပေ့ါဗျာ…
ပိတ်သတ်ကြီး သတိထားမိမှာပါ DSLR တွေမှာZoom ဘယ်လောက် x ဆိုတာ ထည့်သွင်း
ဖော်ပြမထားဘူး ဘာပဲ ပြလဲဆိုတော့ mm နဲ့ပဲ ပြတယ်.. ဆိုပါတော့ ဆြာအုပ် ပြထားတဲ့
200mm lens ဆိုပါတော့ … ဒါဟာ သူ့ရဲ့ Zoom ကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲ သူ့ရဲ့ focal length ကိုပြောခြင်းသာဖြစ်တယ်…။
ဒါဆိုရင် zoom ကိုသိချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆို .. စားကြည့်လို့ ပြောရမယ်။ ဘာစားကြည့်ရမလဲဆိုတော့ ..လိပ်ခေါင်း
အဲ့လေ.. ကင်မလာမှာ 50mm ကို စတန်းဒတ် ထားသမို့ .. 50mm နဲ့ ကိုယ့်ပြောင်းရဲ့ focal length mm ကို စားကြည့်ရင်
Zoom ဘယ်လောက် x ဆိုတာထွက်ပါတယ်။ သည်တော့ 200mm lens ဟာ 4x Zoom ရှိတာသိရပါတော့တယ်။
သည်တော့ လိပ်ခေါင်း ကင်မလာတွေ ဘက် ကြည့်ကြည့်ပြန်တော့ အနှီအပေါ်က သဘောတရားကို အပျော်တမ်းနဲ့
အိမ်သုံး ကွန်ဇူမာတွေ နားရှုပ်မှာ စိုးလို့ မရှင်းတော့ပဲ zoom 4x, 5x, 8x, 10x လို့ သာ ရေးသားဖော်ပြတာ များလေ့ရှိတာပါ။
သည်တော့ လိပ်ခေါင်းကင်မလာ ကိုင်သူများအနေနဲ့ Zoom ကိုသိချင်ရင် တော့ မြှောက်ကြည့်ပါလို့ ပြောရမှာပါ
(ကင်မလာကို လေထဲမြှောက်ရင်တော့ ကိုယ့်ဒေါသနဲ့ကိုယ်) ကျနော် ဆိုလိုချင်တာက 50mm နဲ့ x ကိုမြှောက်ကြည့်ရင်
မိမိလိပ်ခေါင်းရဲ့ အရှည် အဲ့လေ focal length ကို သိပါပြီ။ 10x ကင်မလာ ဟာ 500mm ဖြစ်နေပြီမို့ စူပါတယ်လီ စာရင်းဝင်နေပါပြီ
အဲ့သည့် လောက်ကို DSLR နဲ့ ရိုက်ဖို့ဆို မဟားဒယားပြောင်းကြီးတွေ လွယ်ရပြီမှတ်ပါလေ…။ သည်တော့ လိပ်ခေါင်းကနေ ဒီ
ပြောင်းမယ့်လူတွေရော လိပ်ခေါင်းဟာ ရှည်ရှည် ထွက်လို့ရတယ် ဆိုတာလေး လည်း သိအောင်ရော ဖြည့်လိုက်ပါတယ်ဗျို့။
လိပ်ခေါင်းနှင့် DSLR ကို ယှဉ်ပြပေးသွားတဲ့ ကြားဝင်ပြတဲ့ဆရာ ကျက်ဦ လှဲ့ကိုလည်းကှေးဇူးတင်ပါကြောင်း…
ဆာကြီး … အတန်းတက်သွားပါကြောင်း။ ဒါနဲ့ စကားမစပ် သင်တန်းဆင်းပွဲနေ့ကြရင် ဆာ့ တပည့်တွေ လက်စွမ်းပြဖို့ ခပ်ဟော့ဟော့ မော်ဒယ်လေး အယောက် ၃၀ လောက်ခေါ်ပေးပါနှော်။ ဆာ့တပည့်ကြီး ဒေါင့်မျိုးစုံကနေ အပီရိုက်ချင်နေလို့ပါ။ သင်တန်းဆင်းပွဲမှာ မုန့်မကျွေးရင်ရပါတယ် အဲ့ဒါလေးတော့ ခေါ်ပေးပါနှော် :-)
တယ်လီ ရယ် ဖစ်ရှ် အိုင်း ရယ်ကိုသဘောကျတယ်။ ဆြာအုပ်ကလဲ သူ့ page မပြောဘဲဘယ်လိုလုပ် share လို့ရမှာလဲ။
ကျမ ရဲ့ လိပ်ခေါင်းလန့်စ် က 4x. ။ ရေထဲမှာရိုက်လို့ရတယ်ဆိုလို့ ဝယ်ထားတာ။ zoom ဆွဲလို့သိပ်မရဘူး။
ကျနော့ ပေ့က https://www.facebook.com/gandaryiphotos ပါ.. အကောင့်က https://www.facebook.com/nayokkar ပါ
အောက်ကပုံကိုကြည့်ပြီး ပြောင်းတိုပြောင်းရှည်သမားတွေရဲ့ ဒုက္ခကို စာနာသွားပါကြောင်း
Roll No:6 _အန်တီဘုံမာ….ရှိ
ပညာ ရပါပေတယ်ကွယ် ။
ကျေးကျေးပါ ၊ ဆြာအုပ် ။
ဓါတ်ပုံလေးတွေ နဲ့ ရှင်းပြထားတာကို ကြည့်ရင်း ဖတ်ရင်း
ကင်မရာဈေးနှုန်းလဲ မြင် လိုက် ရ ရော
အောင်မြလေး ဆြာအုပ်ရယ်…..အချိန်ပိုခေါ်တယ်ဆိုလဲ ပြောမှပေါ..
ဒီက စနေ တနင်္ဂနွေ အိမ်အလုပ်တွေ လုပ်ရသေးတယ်တော့…………
တားတားလည်း တက်တွားဒယ်နော် ..
စာဒေါ့ ပျံမမေးနဲ့ … သိရားးး
ပုဆိုးတစ်ထည် ဂဒေါ့မယ်နော် .. ဟီးး
ဖတ်ရှုလေ့လာ ပညာယူသွားကြောင်းပါ ..
ဟယ် မှော်ဖေဖေကြီး နှစ်ထပ်ကွမ်းလာတယ်ဟေ့။
အားလုံးကို သတိရလျှက်ပါ ခင်ဗျား …